Wasiirka wasaarada garsoorka iyo cadaalada Koonfur galbeed oo maanta booqday xarumaha wasaaradaas ee magaalada Baydhaba Janaay. – idalenews.com
Wasiirka wasaarada garsoorka iyo cadaalada Koonfur galbeed oo maanta booqday xarumaha wasaaradaas ee magaalada Baydhaba Janaay.
Wasiirka wasaarada garsoorka, cadaalada iyo kobcinta dowlad goboleedka Koonfur galbeed Soomaaliya, mudane Dr. Maxamed Cali Xaamud ayaa waxa uu maanta booqasho indha indhayn ah kusoo maray dhamaan xarumaha wasaaradaas ee magaalada Baydhaba.
Wasiirka ayaa goobihii uu soo booqday maanta waxaa kamid ah xarumihii garsoorka iyo cadaalada sida dhismayaashii maxkamadaha kala duwan ee magaalada Baydhaba, saldhiga booliska magaalada iyo meelo kale oo dhowr ah.
Mudane Maxamed Cali Xaamud ayaa waxa uu warbixino ka dhegaystay masuuliyiinta xarumihii uu soo booqday maanta iyo weliba shaqaalaha qaar kamid ah xarumahaas.
Wasiirada dowlad goboleedka Koonfur galbeed qaarkood ayaa dhawaanahaanba waday howlo ku aadan wasaaradahooda ayaga oo ay qaarkoodna si toos ah u howl galeen buuxiyeena howlihii wasaaradahooda.
Dhanka kale, waxaa weli socota qorista ciidamada dowlad goboleedka Koonfur galbeed iyo tababarkooda ayada oo dhawaan lagu wado inay magaalada Baydhaba ka dhacdo xaflad daaha looga rogayo ciidamada dowlad goboleedka Koonfur galbeed iyo sida ay howlgali doonaan.